Maamulaha slide dheelitirka iyo xiiso nidaamka bixinta si toos ah-line
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Maamulaha slide dheelitirka iyo xiiso nidaamka bixinta si toos ah-line
lacag soo amaahday, waxaa loo abaalgudi doonaa si loo dejiyay waqtiga amaahashada.
caadiga ah waa maamulaha slide dheelitirka iyo nidaamka bixinta xiiso toos ah-line iyaga ka mid ah.
Tani waa, maaliyadda macaamiisha iyo kaarka deynta waa hab in waxa ay sidoo kale loo isticmaalaa, sida faa'iidada iyo khasaaraha waa Will sida lagama maarmaan Waa maxay.
/ maamulaha la xiriira oo xiiso go'an heerka wareegi la xiriira
/ waa maamulaha go'an heerka wareegi
waa maxay maamulaha slide dheelitirka iyo habka bixinta xiiso toos ah-line?
maamulaha slide dheelitirka iyo habka bixinta xiiso toos ah-line waxa caadi ahaan loo yaqaan "slide dheelitirka wareegi habka".
sida farqiga u ah hab kale oo ka-bixinta, lacagta bixinta loogu talagalay amaahda aysan waxba ka beddelin waxa uu noqday feature a.
Intaa waxaa dheer, tan iyo markii uu amaahda ee nidaamka wareegi, sidoo kale waa hal dhibic in lagu celiyo amaahatay kama badna xadka. mid
in waxaa badanaa loo arkaa in deymaha card, sannadihii la soo dhaafay maaliyadda macaamiisha in uu yahay amaahda aasaasiga ah iyadoo la isticmaalayo habka this sidoo kale jira dad badan. Marka waxaan codsan caching
ku dhaheen in ay tahay hab isha. Tusaalooyin qaas ah ee
maamulaha slide dheelitirka iyo xiiso toos ah-line nidaamka bixinta Haddii aad
tusaale ahaan 200,000 yen amaahatay ee dulsaarka ah 14%, xaddiga in laga abaalmariyo ka dib markii muddo hal bil ah waa sida soo socota.
(20 Man × 14%) × (30 ÷ 365 maalmood)
= 2296 qadada
yen 4 jeer, oo ka fikiraya, waxaad tidhaahdaan, ma aha tiro aad u badan oo ah lacag.
bixinta waxaa la bixiyaa in bil walba lacagta bixinta go'an kala duwanaan doonaa iyada oo ku xiran dheelitirka. Haddii aad qaaday nidaamka, sida kordhinta ee
dhexe waa, aynu la xusuusto in kasta oo waqtiga bixin sidoo kale.
Faa'iidooyinka in faa'iidooyinka
maamulaha slide dheelitirka
iyo nidaamka bixinta xiiso toos ah-line in maamulaha slide dheelitirka iyo habka bixinta xiiso toos ah-line waa in aad u fudud in la sameeyo qorshe loogu talagalay lacagta bixinta bil kasta lacag.
Sababtan awgeed, waxaa sidoo kale waa halis yar ee daahsan iyo fursad kasta oo qasdin. Sida
keligiis ku nool, maamulka lacagta adiga kuu gaar ah, qof kasta oo uu noqon doono bixinta habka talooyin ah.
Intaa waxaa dheer, by amaahashada shirkadda, waxa suurtagal ah in aan la hoos bixin.
Tani waa markii ugu of bixinta, haddii wax ka yar markii hore waa maamulaha, wax la samayn karaa dalab ee sida taleefanka ama xafiiska. Sida
isbitaal lama filaan ah, xataa ka dhacaya waa fursad kasta oo dhibaato, waxa uu noqday khatar sidoo kale ka hawl yar in ay ka fogaadaan bixinta oo aan la samayn karaa.
Ka sokow, marka kharashka lama filaan ah ayaa ka dhacay, waa faa'iido weyn u ah in ay awoodaan in ay amaahdaan oo dheeraad ah haddii uu jiro qol on qadarka amaahatay. In the case of isticmaalo
amaahda card, marka lagu daro ATM u gaar ah sidoo kale, sidoo kale waxa ay noqotay ka ATM ee dukaanka dhaw raaxadeeda waxa laga heli karaa. Haddii aan
ka bixin bil kasta si adag u tag, doonaa in ay fududahay in la dhiso wareeg amaahdo oo keliya marka loo baahan yahay waa mudnaan.
khasaaro in maamulaha slide dheelitirka iyo nidaamka bixinta xiiso toos ah-line < Faa'iida in / H2>
maamulaha slide dheelitirka iyo habka bixinta xiiso toos ah-line, waxaa kiis kaas oo inta badan u bixinta uu noqdo mid xiiso yahay, waxaa la tilmaamayaa karaa in. Marka
sii wadaan in ay abaalmarin inta ugu yar ee lacagta la bixiyo bil kasta, ma hoos waa qadar lacag xad, ma beddeli culayska saaran boorsada jeebka.
natiijo, waxaa lagu weeraray doonaa by dhalanteed ah in uu jiro kharash ah ee bil kasta ka go'an, aad wadada u bixinaya noqdo fog.
Sidaa darteed, haddii aad ha isticmaalin in ka caawiya isha si ay u qorsheeyaan in muddo gaaban, oo aan mustaqbalka fog, sidoo kale bixinta mar dambe soo afjaro doonaa mid weligiis waara.
Tani waxay sidoo kale waa run in hab kasta oo u bixinta, laakiin Haddii aadan soo celin marka aad ku noqon karto, waxay keeni doontaa in ay sabab u ah in ka dib markii uu qoorta dhibtaan.
Intaa waxaa dheer, in ay dhacdo fulinta amaahda ah oo ay jidka ku, waxay u baahan yihiin in la kordhiyo xaddiga lacagta waqtiga bixinta, waa yahayna in mar dambe ma at dhan hoos.
on male ah mar walba "inuu ku soo laabto", Isku day in aad ku haay maanka isticmaalka qorsheeyay.
maamulaha slide dheelitirka iyo Xiisaha habka bixinta si toos ah-line
, by xaddiga lacagta ama amaahasho dheelitirka saxiixay up for amaahda ah, waxa ay bixin bil kasta kala duwan. lacagta bixinta
qorshaha waxaa kale oo ay fududahay in la qotomiyey, waa in sidoo kale waa nabad ah qof kasta maanka oo doonaya in uu ka amaahan ee ugu horeysay gargaarka lacagta waqtiga.
lahaa daahsan iloobin taariikhda bixinta, in aad sidoo kale suurtogal noqon in la yareeyo qaladaad.
Si kastaba ha ahaatee waxtar leh Dhanka kale, haddii aadan sameeyo qorshe bixinta adag, daryeelka waa in loo qaato in xigi doona nolol in laabtay xiisaha kaliya xitaa ka dib markii weligiis. Sida marka si
lacag bixin karin, wada lacagta, iyo orsadiiba waan ku hay si loo yareeyo tirada jeer bixinta xitaa wax yar, ayaa sheegay in ay hab wanaagsan fududahay in la isticmaalo. Faa'iida in maamulaha slide dheelitirka
iyo habka bixinta xiiso toos ah-line, waxaa kiis kaas oo inta badan u bixinta uu noqdo mid xiiso yahay, waxaa la tilmaamayaa karaa in. Marka
lacag bixin karin, wada lacagta, iyo orsadiiba waan ku hay si loo yareeyo tirada jeer bixinta xitaa wax yar, ayaa sheegay in ay hab wanaagsan fududahay in la isticmaalo. Habka bixinta The
maamulaha slide dheelitirka iyo xiiso toos ah-line, by xaddiga lacagta ama amaahasho dheelitirka saxiixay up for amaahda, waxaa laga bixin bil kasta kala duwan. lacagta bixinta
lacag bixin karin, wada lacagta, iyo orsadiiba waan ku hay si loo yareeyo tirada jeer bixinta xitaa wax yar, ayaa sheegay in ay hab wanaagsan fududahay in la isticmaalo.